ဂဇက်ကြေငြာစာအမှတ် ၁/ ၂၀၁၄ (Edited by Mod7) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဂဇက်ကြေငြာစာအမှတ် ၁/ ၂၀၁၄ (Edited by Mod7)
ဂဇက်ကြေငြာစာအမှတ် ၁/ ၂၀၁၄ (Edited by Mod7)
- တွေ့ မရှောင်
Posted by တွေ့ မရှောင် on Jun 27, 2014 in Copy/Paste, Letter to The Editor, Myanmar Gazette, Other - Non Channelized | 32 comments
တွေ့မရှောင်သည် လက်ဝှေ့သမားမဟုတ်ပါ ။
မန္တလဂဇက်ပါလ များ ဖြစ်သည် ။
နာမည်နာမအားဖြင့် တွေ့မရှောင်ဟု သုံးစွဲသော်လည်း တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါ။ မန်ဘာဟောင်းများစွာ ပါဝင်နေပါသည် ။
ခေါင်းဆောင် နှစ်ဦးမှလွဲ၍ မည်သူပါဝင်နေသည်ကို မသိနိုင်ပါ ။
လျှို့ဝှက် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည် ။ယူဇာနိမ်းတစ်ခု လျှို့ဝှက်ကုဒ် တစ်ခုတည်းဖြင့် ရွာအကျိုးလိုလားသူများပေါင်းစည်းပါဝင်နေသည် ။
အမြင်မတော် ဆင်တော်နှင့်ခလောက်များကို ဝေဖန်ပါမည် ။ နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးရန် ရည်ရွယ်ပြီးတင်သောစာများကို ကန့်ကွက်ပါမည် ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ထိပါးစော်ကားသူများကို တိုက်ခိုက်ပါမည် ။ ဘာသာရေးလူမျိုးရေး ရန်တိုက်သောစာများ၊ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရန်သွေးထိုးမြှောက်ပင့်သောစာများကို ဝေဖန်ရှုံ့ချပါမည် ။
ကောင်းမွန်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ရေးသားသောစာကောင်းပေကောင်းများကို အားပေးပါမည် ။ ဂဇက်စည်းကမ်းထက်ပိုပြီး ဆဲဆိုကြမ်းတမ်းသောအရေးအသားများအား အားမနာတမ်းဝေဖန်ပါမည် ။
တွေ့မရှောင်သည် အဖွဲ့ဝင်ခြင်းမသိသောကြောင့် အချင်းချင်းလည်း မျက်နှာထောက်ခြင်းကင်းပါလိမ့်မည် ။ အတွေးအခေါ်အယူအဆလည်းမတူပါ။ ယနေ့မှစ၍ အသက်ဝင်ပြီဟု မှတ်ယူစေချင်ပါသည်။
မြန်မာ့ဂဇက်သည် လွတ်လပ်စွာရေးသားခြင်း၊ ပြောဆိုခြင်းအားအားပေးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း
မြန်မာ့ဂဇက်ရှိ အမာခံစာရေးစာဖတ်သူများအားလုံးသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာဖြင့် ပြင်ပတွင်တွေ့ ဆုံဖူးကြသူများဖြစ်ကြပြီး ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်မှုဖြင့်ရေးသားနေကြသူများစုစည်းနေကြသော အဆင့်အတန်းရှိလူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း
မြန်မာ့ဂဇက်တွင် ကိုယ်ပိုင်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းသူများရှိနေပြီးဖြစ်သလို သူကြီး (Admin) ကိုယ်တိုင်လည်း ဂဇက်စည်းကမ်းချက်များကို နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေး စံချိန်စံညွှန်းဖြင့်ထိန်းသိမ်းလျက်ရှိပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဂဇက်တစ်ခုလုံးအားသက်ရောက်စေချင်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အမိန့်ကြေငြာစာထုတ်ပြန်ခြင်းသည် ဂဇက်စာရေးစာဖတ်သူများ၏အခွင့်အရေးကို ထိခိုက်ချိုးဖောက်သည့်အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ဂဇက်၏ Admin နှင့်သူ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ၀န်ရောက်စွတ်ဖက်သကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့် တွေ့ မရှောင်ဟူသည့်အဖွဲ့ အား ယခုကဲ့သို့အမြင်မတော် ဆင်တော်နှင့်ခလောက်အပြုအမူများ ဆက်လက်မပြုလုပ်ပါရန် ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
About တွေ့ မရှောင်
တွေ့ မရှောင် has written 1 post in this Website..
View all posts by တွေ့ မရှောင် →
တွေ့ မရှောင် says:
တွေ့မရှောင်သည် သူကြီးအထက်တွင် မရှိပါ
တွေ့မရှောင်သည် ရမ်းကားနှောင့်ယှက်သူများအား တုန့်ပြန်၍ ဤရွာကြီး ပိုမိုစည်ကားလာရေးကိုသာ အလေးထားပါသည်။
“တွေ့ မရှောင်”ထဲ တောင်လှေခါးကြီးမိုက်ကောပါလားဟင်..ငင် :harr:
ရွာထဲလည်း အဖွဲ့နဲ့ ရမ်းကားမည့်သူ ရှိပြီဆိုပါလားးးးးးးးးး
အဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ မှန်ပါသည် ။
ရမ်းကားသူများနှောက်ယှက်သူများအား တုန့်ပြန်ရန်ဖြစ်သည် ။
ဂဇက်လောကပါလ ဖြစ်ပါသည် ။
လူမိုက် ခင်ဇော် says:
ဘယ်သူ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ များ
နာ့ နာမည်ကို ယူလိုက်ရတာတုန်း?
အမည်အား မှတ်ပုံတင် မူပိုင်ထားပြီးပါသလား
တွေ့မရှောင် သည် လူပေါင်းများစွာပါဝင်နေ၍
သင်နှင့် ရင်းနှီးသူများလည်း ပါဝင်ပါလိမ့်မည်
စည်းကမ်း ထိမ်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ ဆိုပါတော့???
နာ ဒက် ပြန်လာရင် နာ့ ကို လာရွေးနိုင်အောင် ပြောထားမို့။
ပလုတု ဘယ်တုန်းက ဘယ်သူဖွဲ့လိုက်တဲ့အဖွဲ့ပါလိမ့်။ ကိုခင်ဇော်မှတ်နေဒါ ကိုခင်ဇော်ဖွဲ့တာမဟုတ်ဘူးကိုး။ ဆန်းပ့ါ။ ကိုင်းကိုင်းရည်ရွယ်ချက်မှန်ရင်တော့ ကောင်းပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ မကောင်းဘူးထင်တယ်။ ဒီအဖွဲ့ကိုစောင့်ကြည့်နေပါ့မယ်။
အဲ့လို အဖွဲ့မျိုး လိုနေတာ ကြာပေါ့
အေးလေ ဖွဲ့ ပြီးပြီဆိုတော့ ဒီအဖွဲ့လေး သက်ဆိုးရှည်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
ဟယ် SS အဖွဲ့ကြီး ပါလား။း)
တကယ် စေ တ နာ သန့် သန့် နဲ့ လုပ် မယ် ဆို ရင်တော့ ကောင်းပါတယ်။
စေတနာကောင်းတယ်ဆိုရင်လဲ အများ က ထောက်ခံ မှာ ပါ။
ရွာထဲလည်း မရောက်တာကြာတော့ အဖွဲ့တွေ တော်တော်များနေတယ် ထင်ပါ့…
ရှိသင့်​တာ​တော့မှန်​ပါရဲ့ တစ်​စုံတစ်​​ယောက်​ကို ရန်​စသလိုကြီးများဖြစ်​​နေသလားလို့ ကိုယ်​နဲ့​တော့ဆိုင်​မယ်​မထင်​ပါဘူး ။ ပို့စ်​တင်​ထားတဲ့ စာအသွား အလာကိုကြည့်​​ပြောတာ ။
(ခွက်ဒစ် – UML)
မော့ ဆဲဗင်း က ဘူတုန်းဟင်?
အ ရင် ၂ ရက် ရွာထဲ ဘွက်ပေါက်နေချိန်က ဘာလုပ်နေလဲဟင်?
ခုမှ သတင်းကြားပြီး ဝင်လာဖွတဲ့ အသံကြားပြီးမှ ဒီလိုဖျက်တာတော့ မကောင်းဝူးများလားးး
အို မသိပါဘူးးး :mrgeenn:
နာလည်း မူတူးနဲ့ အိပ်ချင် အဲလေ ဟုတ်ပေါင် အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ လာမေးမိပြန်ပါပြီ။
ကုန်ပြီလဲဟင် လန့် ချင် စရာကြီး
အော်. . .
ဒီလို ဒီလိုတွေ ဖြစ်သွားပြီကိုးးးး
နားလည်သလို မလည်သလိုလို ၊ ဂေဇက်ကြီးလဲ ဂိုဏ်းအုပ် ဂိုဏ်းချုပ်တွေနဲ့
ဖြစ်နေတာမျိုးလား ကွယ်ရို့ ။
ဘယ်ချောင်းသွား အိပ်နေလဲ မသိပါဘူး ….
တွေ့မရှောင်လည်း ပြောသေးတယ် အဖွဲ့ဝင်ချင်း မသိနိုင်ပါတဲ့..
တွေ့မရှောင်သည် အဖွဲ့ဝင်ခြင်းမသိသောကြောင့် အချင်းချင်းလည်း မျက်နှာထောက်ခြင်းကင်းပါလိမ့်မည် ။ အတွေးအခေါ်အယူအဆလည်းမတူပါ … တဲ့
ဂေဇတ်ရွာမှာ ပို့စ်တွေထဲ အမြင်မတူရင်ဆဲချင်ဆဲမယ် ဆိုချင်ဆိုမယ်
အပြင်မှာ ရယ်မောဆက်ဆံ အတူ သောက် စား နေတဲ့သူတွေ အများကြီးပါဗျာ
Mod –7ကြီးကော ၊ တွေ့မရှောင်ကော ၊
နှစ်ဖက်စလုံးက ကိုယ်ရွာသူား Senior အချင်းချင်းတွေပဲဟာ ။
အသာ လုပ်ကြပါကွယ် ။ အပြောအဆိုတွေ လက်လွန်ကုန်ပါ့မယ်ကွယ် ။
(ကောင်းမွန်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ရေးသားသောစာကောင်းပေကောင်းများကို အားပေးပါမည် ။ ဂဇက်စည်းကမ်းထက်ပိုပြီး ဆဲဆိုကြမ်းတမ်းသောအရေးအသားများအား အားမနာတမ်းဝေဖန်ပါမည် ။)
ဒီအချက်က တော့ ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက် လေး လို့ ထင် ပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်မယ်ေ၇းထားတာကို မောဒ်က မျဉ်းတားလိုက်တော့ ကောင်းတာ လုပ် မယ်ဆို တောင် မှ တွေ့ မရှောင်လုပ်တာကိုဆို လက် မခံ ဘူးဆိုတဲ့ သဘောသက်ေ၇ာက်သွားသလိုပါဘဲ။
သူတို့ ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ေ ကာင်းတာ ကို လက် ခံ ပြီး မကောင်းတာ ကို တော့ ကန့် ကွက် မယ် ဆိုရင် အခုလို edit လုပ်တာ ထက် ပို သင့် တော် မယ်လို့ ထင် မိ ပါ တယ်။
စာအားလုံးကိုမျဉ်း တား ပြီး ပိတ်လိုက်တော့ ဘာလုပ်လုပ်လက်မခံဘူးဆိုတဲ့ သဘောသက်ေ၇ာက်သွားတယ် လို့ ခံစားရ ပါတယ်။
ပြန်လည်စဉ်းစား ပြီး ဆွေးနွေး သင့် တယ် လို့ ထင် ပါတယ်။
ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက် နဲ့ ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ သူတို့ ပေး တဲ့ ကော်မင်း တွေ ပိုစ်တွေ နဲ့ ချိန်ထိုးပြီး စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ သာ စေ တာ မမှန်ခဲ့ ရင် အမှားတွေ လုပ် ရင် အလို လို ဘေးေ၇ာက်သွားမှာပါ
ဒါက ကျနော့် အမြင်ပါ။
အင်း အရင်န၀တ နဲ့ အခုအစိုးရ ဘာကွာလဲလို့ ကျုပ်ကိုမေးရင် ကျုပ်ကတော့ ဘာမှမကွာဘူး အရင်န၀တက တီဗီသတင်းမှာ ဘောင်းဘီအ၀တ်များပြီး အခုအစိုးရက ပုဆိုးဝတ်တာများတယ် မျက်နှာတွေကတော့ တူသလားလို့။
ဒီပို့စ်ကို စတစ်ကီက ဖြုတ်ချလိုက်ပါ့မယ်..။
ကျုပ်ကိုယ်ပိုင်သဘောကတော့.. လူသားတဦးတယောက်ကို.. ထိမ်းချုပ်..ကန့်သတ်တဲ့.. စည်းကမ်းတွေ..ဥပဒေတွေမုန်းတယ်..။
အခြေခံစည်းကမ်းကလွဲလို့.. ကန့်သတ်ထိမ်းချုပ်မှုတွေ… နည်းနိုင်သမျှနည်းစေချင်တယ်..။
အထဲပါဝင်နေသူတွေကိုယ့်ကိုယ်တိုင်… အသိစိတ်ဓါတ်ရှိရှိနဲ့.. ကိုယ့်နေရာ.. ကိုယ့်ဒေသအနေနဲ့.. ထိမ်းသိမ်းလည်ပါတ်စေချင်တယ်..။
မန်ဘာ(ရွာသူား) တဦးတယောက်ရေးပုံ.. ဆိုပုံက…. အများစုသဘောနဲ့မကိုက်ညီတာတွေ့ရင်.. ၀ိုင်းဝန်းဖြောင်းဖျကြ.. ညှိပေးကြစေလိုပါတယ်..။
(ဖြစ်နိုင်ရင်).. အခြေအနေတခုရောက်တဲ့အထိ.. သူ့အလိုလိုသိတတ်သွားတဲ့အထိ.. အချိန်တခုပေး.. စောင့်ကြည့်ကြစေလိုပါတယ်…။
ပုဂ္ဂလိကအခြေအနေ.. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိခိုက်အောင်.. တွန်းတိုက်ပြောတာမျိုး မဖြစ်/မလုပ်ကြစေချင်ပါ..။
ခုတလော.. ၂ဖက်အစိုးရပိုင်းကတ်သက်သူတွေနဲ့တွေ့တာ.. စကားပြောဖြစ်တာများပြီး.. ရွာ..အဲ..မြို့ကို.. တဆင့်မြှင့်ဂီယာထိုးမလို့လုပ်နေတာနဲ့.. အလုပ်များနေတာပါ..။
ဂွတ်.. ဂီ… ဂိ့…။
သန်ဆင်ခိုင်မ် လေးဂိုခြစ်တယ်… အိုယေးရို ယေးရိုရေးယို့ရေ… ခြစ် ခြစ်လိုက်တော့..